Ikhabethe le-Mountain View elinephaneli elikhulu lengilazi - I-Airbnb
Ikhabethe le-Mountain View elinephaneli elikhulu lengilazi
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Palaniselvan
Igumbi lesitezi sokuqala, elinokungena okukhethekile, i-balcony yesibhakabhaka evulekile kanye nokufinyelela kuthala elivulekile. Ingakwazi ukulala kahle izivakashi ezingu-2 kanti neyesi-3 nayo ingampintsha. Uhlobo lwesitudiyo olunekhishi eliyisisekelo lokupheka kanye negumbi lokugezela elinamathiselwe elitholakalayo.ed eduze kakhulu namahlathi nezintaba ngakho-ke kubalulekile ukufika ngaphambi kokuba kumnyama. Iphaneli enkulu yengilazi engamafidi angu-12 ububanzi ohlangothini lwentaba ukuze izivakashi zijabulele ukubuka. Kozela ukuze ulale ubuka izinkanyezi ngobusuku obucwathile.. uzulazula phezu kwezintaba!
Lena indlu yasepulazini eseduze kakhulu nezintaba ze-ghat ezisentshonalanga. Iqhele ngamakhilomitha angu-4 ukusuka ku-Irutupallam Junction emgwaqeni waseSiruvani. Ngakho-ke, ukuhlala lapha kuyithuba lokuhlala nemvelo, ukude ngokuphelele nethrafikhi nempilo yedolobha. Ukuhlwa nokusa ekuseni kubaluleke kakhulu
Kuyipulazi eliseduze nendle. Ama-Pls afika ngaphambi kuka-6 PM futhi ahlele ukuhlala ngaphakathi epulazini kuze kube yikhefu lasemini ngo-6 AM. Ngezikhathi ezithile, izindlovu zingaphuma emahlathini ngakho-ke akunconywa ukuzulazula ngaphandle kwepulazi ngemva kuka-6 PM. Ucingo lwepulazi lufakwa ugesi ngemva kuka-6:30 PM - kuze kufike ku-6 AM ekuseni.
Ngihlala cishe ku-15 KMs futhi ngizotholakala ngocingo. Ngingakwazi ukushayela ngehle emizuzwini engama-30 uma ngingathola usizo oluphuthumayo. Ngizoba nomlindi ohlala ngaphakathi epulazini futhi angasiza nganoma yini encane